﻿ ‘सबै इटहरीवासीलाई रोजगार बनाउन सकिन्छ’ : राजेन्द्र केशरी घिमिरे
शुक्रबार ३१, जेठ २०७६
राजेन्द्र केशरी घिमिरे इटहरीका अगुवा व्यवशायी हुन् । दन्तकाली फुड इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक र विभिन्न संघसंस्थामा रहेर सामाजिक जिम्मेवारी निर्वाह गरीरहेका केशरी शैलेश विष्ट प्यानलबाट उद्योगी व्यवशायीको चुनावमा उठेका छन् । उनीसँग न्यूजलयका लागि सरिता भण्डारीले गरेको कुराकानी :
चुनावकोे तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ ?
म उद्योग तर्फको उमेदवार भएको हुनाले हाम्रा उद्योगी साथीहरुको घर दैलोमा गई आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गरेर म चुनावको तयारी गरिरेको छु ।
म २०४७ सालदेखि सानो उमेरदेखि केही गर्नुपर्छ, उद्यम व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर काठमाडौंमा सबैभन्दा पहिले यति नुडल्स नामको नुडल्स उद्योगको स्थापना गरेको थिएँ । त्यो उद्योगलाई निरन्तरता दिदै ३० वर्ष सम्म म आफ्नो त्यहि व्यवसायलाई निरन्तरताका साथ आज एउटा एक नम्बर प्रदेश भरि स्थापित ब्रान्डको रुपमा मेरो रोसा नुडल्सलाई अगाडी बढाइरहेको छु ।
सफल व्यवसायी बन्न के गर्नु पर्दो रहेछ ?
सफल व्यवसायी बन्न सबैभन्दा पहिले आत्मविश्वास तथा लगनशिलता आवश्यक पर्छ । जुन व्यवसाय गरिन्छ त्यो व्यवसायको बरेमा विस्तृत जानकारी राखेर उत्पादको महत्वपुर्ण पक्षलाई समेटेर गइयो भने सफल उद्यमी अवश्य बन्न सकीन्छ ।
व्यवसायीका मुख्य समस्याहरु के होलान् त ? र समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ?
व्यवसायीका मुख्य समस्याहरु त्यसमा पनि लघु, घरेलु उद्योगको हिसाबमा हेर्दा उद्योगीका समस्या भनेको नेपालको परिपेक्षमा धेरै छन् । सबैभन्दा पहिले त बजारको समस्या तथा उत्पादन गर्न प्रविधिको समस्या छ । नेपाललाई सबृद्ध नेपाल बनाउने हो भने लघु घरेलु उद्योगको विकास गर्नु जरुरी छ । स्थानिय स्रोत तथा साधनमा आधारीत उद्योगलाई प्रोमोट गर्नु जरुरी छ । र उद्योगीहरुको समस्याहरु जस्तै उत्पादनको समस्या, बजारीकरणको समस्या तथा सबैभन्दा ठुलो समस्या प्रविधि तथा प्राविधिकको समस्यालाई समाधान गर्नु जरुरी छ ।
तपाइले जितेर गएपछि यो क्षेत्रको विकासका लागि के गर्नुहुन्छ ?
म जितेर गएपछि उद्योगहरुलाई व्यवस्थीत गर्ने, घरेलु उद्योगीहरुको समस्याहरु पत्ता लगाई समाधान गर्ने, घरेलु उद्योगलाई घरेलु उद्योगग्रम स्थापना गर्ने, ठुला उद्योगहरुलाई औद्योगीक क्षेत्रको स्थापना गर्ने र यहाँ भएका उद्योगीहरुमा महिला उद्योगीलाई उद्यमशीलताको तालिम अहिले पनि विगत १५ वर्षदेखि चलाइरहेको छु भने पछि पनि निरन्तर व्यवसायमुलक तालिम चलाइरहने छु ।
तपाइको प्रतिस्पर्धीभन्दा तपाइ के कारणले सक्षम र जित्छु जस्तो लाग्छ ?
लघु घरेलु उद्योगको अभियन्ता भएर विगत १५ वर्षदेखि हिडेको कारणले घरेलु तथा ठुला उद्योगमा के–के समस्या छन् भन्ने अफुले भोगेको छु र देखेको पनि छु । नेपाल सरकारसँग विदेशी हाम्रा उद्योग व्यवसायीसँग जोडिएको छु र त्यो प्रविधिहरु यहाँ ल्याउनु पर्छ, उद्योगीहरुलाई सफल बनाउनु पर्छ तथा उत्पादन मुलक उद्योगहरु हामीले सफल बनाउनुपर्छ भनेर मैले नेपाल सरकार स्थानीय तहसँग, प्रदेश सरकारसँग तथा संघीय सरकारसँग विभिन्न चरणमा बसेर विभिन्न खालका काम गरेको छु । इटहरीलाई चिनाउने खालको लघु घरेलु ग्राम र औद्योगीक क्षेत्र घोषणा गरेर त्यसलाई हामीले उद्योगीको विषयमा इटहरीलाई चिनाएर यहाँका सम्पुर्ण नागरिकहरुलाई रोजगार दिलाउन सक्ने काममा म यो तीन वर्षमा अगाडि बढ्ने छुृ ।
म एउटा उद्योगको अभियन्ता हु । उद्योगीहरुको काम गर्छु । त्यसैले मेरो भिजन उद्योग वाणिज्यमार्फत् स्थानिय, प्रदेश तथा केन्द्रीय तहमा लबिङ गरेर इटहरीलाई एउटा लघु घरेलु उद्योगको क्षेत्र घोषणा गर्ने हो । यहाँ रहेका ठुला तथा साना उद्योगको प्रोमोसन गर्ने बारेमा मसँग एउटा भिजन तथा खाका छ । त्यसलाई लागु गर्नको लागी यहाँका व्यवसायिले मलाइ भोट दिनु हुन्छ भन्ने आशा छ ।
अन्त्यमा आफ्ना भोटर्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यहाका उद्योगी तथा उद्यमीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने उद्योग वाणिज्य संघ तथा उद्योगहरुको कुनैपनि छाता संघठन भनेको उद्योगीहरुको काम गर्नका लागी बनाएको एउटा संगठन हो । त्यसैले उद्योग वाणिज्य संघमा मलाई भोट दिएर जिताउनु भो भने तीन वर्षसम्म व्यवसायी तथा उद्योगीहरुका समस्याहरुको बारेमा म एउटा भिजन सहित स्थानिय तथा प्रदेश तह र केन्दि«य मात्र हैन हाम्रा नजिक रहेका छिमेकी राष्ट्र उद्योगीहरुसँग विभिन्न चरणमा गएर प्रविधिको बारेमा कुरा गरेको छु ती प्रविधिहरु भित्र्याउन र हाम्रा उद्योगहरुलाई अगाडी बढाउन म लागी परेको छु ।
होला र???? म एक बर्ष देखि यहि ठाउमा रोजगारीका लागि चिने जाने 25 जना उद्योगि व्यावसायि लाई नमस्ते गरेर पार नलागेको मान्छे हो।